Labada Nooc ee Ugu Fiican: Fiirinta Isku-dhafka Labka Lab - Taranka
Labada Nooc ee Ugu Fiican: Fiirinta Isku-dhafka Labka Lab
Daryeelka ulaha isweydaarsiga labaduba waxay la macno noqon karaan labanlaabidda dhibaatada iyo labalaabidda xiisaha. Lahaanshaha isku-darka Husky Lab aad u caqli badan oo ciyaar leh, sidoo kale loo yaqaan Labsky ama Huskador , waa tusaalaha ugu fiican.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonnaa sababta ay iskudhafkani u samayn karo xayawaan aad u wanaagsan qoyskiinna. Haddii aad adigu iska leedahay milkiile cusub, akhri si aad u hesho macluumaad xiiso leh oo ku saabsan nambarkaaga shaybaarka 'Husky'!
Asalka isku dhafka Husky Labrador
Muxuu dhab ahaan u eg yahay Isku-darka Lab-labka Labku?
Dabeece noocee ah ayaan ka filayaa Lab Husky Mix?
Sida loo tababaro Lab iyo Husky mix
Baahida jimicsiga ee isku dhafka Husky Lab
Qurxinta iyo talooyinka kale ee daryeelka ee Lab Labka Miisaaniga ah
Cunto noocee ah ayaan siiyaa shaybaarkayga Husky?
Qaar ka mid ah arrimaha caafimaadka ee isku-darka sheybaarka 'Husky Lab'
Helitaanka iskudhafkaaga Lab Husky mix
Laablaab dhibaatada, labalaab madadaalo!
Isku-darka Husky Lab waa isku-darka a Siberia Husky iyo a Labrador dib u habeyn . Si macquul ah, waxaa si ula kac ah loo kariyay labaatankii sano ee la soo dhaafay si loo soo saaro eey leh saaxiibtinimada Labrador iyo dabeecadda deggan ee Husky.
In kasta oo ay tahay wax cusub oo lagu daray liiska iskutallaabta adduunka oo dhan, haddana Huskador wuxuu sidoo kale ku sii kordhayaa caan ka mid ah kuwa soo saara iyo milkiilayaasha.
Labrador Retriever (Lab) ayaa asal ahaan ka soo jeeda Newfoundland . Taariikhdeeda asal ahaan waxay dib ugu laabanaysaa markii gobolka Kanada uu weli ahaa gumeysi Ingiriis ah.
Asal ahaan waxaa loo soo saaray inay u adeegaan sidii eeyaha shaqeeya . Laga soo bilaabo magacooda laftiisa, shaqadooda ugu weyni waa inay soo qaado kaawada mulkiilayaashooda , oo badanaa ka kooban shinbiraha iyo kalluunka. Tani waxay sharraxaysaa jacaylka Labrador Retriever ee biyaha.
Caqliga iyo dabeecadda daacadda ah ayaa ku kasbatay jacaylka ugaarsato badan iyo kalluumeysato, taasoo ka dhigtay Labradors saaxiibka ugaarsiga ay ugu jecel yihiin.
Dhinaca kale, Siberia Husky wuxuu ka yimid dhulalka qabow ee Siberia, Ruushka. Iyaga ayaa ku soo barbaaray qabiilooyinka Chukchi si ay sidoo kale ugu adeegaan eeyaha shaqeeya.
Xayawaanka loo yaqaan 'Huskies' ayaa gacan weyn laga geystay gaadiidka , gaar ahaan jiidaada jilaaga cuntada, xaabada, sahayda, iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah dhulka.
Ku barbaaray qaab qoys, eeyadan waxaa loo bartay inay ka ag dhawaadaan aadanaha; qabiilooyinka Chukchi, Huskies xitaa wey ahaayeen deganaan ku filan in lagu aamino ilmaha agtooda.
Ka timaadda jinsiyadaha waalid ahaan taariikh ahaan loo yaqaan inay si fiican ula shaqeeyaan bini-aadamka, isku-darka Labrador Husky ayaa si aan caadi ahayn loogu kalsoon yahay dadka, sidoo kale.
Dhexdhexaad ilaa cabbir weyn, isku darka Husky Lab buuran oo culeyskiisu dhan yahay 40 ilaa 60 rodol (18 illaa 27 kg). Way ka kori karaan 20 ilaa 23 inji (50 ilaa 59 cm) oo dherer ah
Inta badan noocyadan isweydaarsiga ahi waxay leeyihiin muuqaal muuqda sababtoo ah jaakado midabbo badan leh .
Haddii ay leedahay wax badan oo ka mid ah hiddo-wadayaasha Siberia Husky, isku-darka Lab-Husky wuxuu yeelan karaa midabbo jaakad ah agouti, piebald, ama naxaas , iyo kuwo kale.
Huskador A oo u janjeera dhinaceeda Labrador Retriever wuxuu yeelan karaa jaakad jaalle, madow, ama shukulaato .
Sifad kale oo ka dhigaysa isku-darka Labrador Husky inuu yahay mid muuqda ayaa ah midabka indhaha.
Caadi ahaan, waxaad ka heli kartaa isku-darka shaybaarka 'Husky Lab' oo leh indho bunni ama buluug ah, laakiin sidoo kale waxay u badan tahay inay helaan laba indhood oo midabyo kala duwan leh, xaalad si kale loo yaqaan heterochromia .
Dhagaha isku dhafan ee 'Husky Lab' ayaa laga yaabaa inuu mid toosan yahay (laga soo dhaxlay Husky) ama hoos loo fooraro (sida Labrador).
Arrin caadi ah oo ku timaadda helitaanka iskutallaabta ayaa ah inaadan inta badan garanaynin waxa laga filayo goorta ay timaaddo dhaqanka eeygan iyo astaamihiisa. Isku-darka Siberian Husky Lab maahan mid ka reeban tan.
Labrador Retrievers iyo Siberia Huskies waxay leeyihiin astaamo badan oo ay wadaagaan. Tusaale ahaan, ahaanshaha eeyaha shaqeeya, labadan taranka ayaa ah caqli badan oo tababaran . Waa ammaan in la filo in eygaaga Husky Lab uu yeelan doono sifooyin isku mid ah.
Sida waalidkood, Labiska ayaa sidoo kale si dabiici ah daacad iyo ilaalin ah qoysaskooda aadanaha.
Ha ku xisaabtamin iyaga sida eeyaha ilaaliyaha ah, in kastoo, maaddaama noocyadan isweydaarsigu ay badanaa yihiin dan ka lahayn shisheeyaha . Tani waa wax ay ka dhaxlaan Siberia Husky.
Inta badan isku-darka Lab-Husky wuxuu dhaxlaa dabeecadda fudud ee Shaybaarka iyo ciyaarta Husky. Isu-geyntaas ayaa ah had iyo jeer u ciyaaro waqtiga ciyaarta , taas oo ka dhigaysa iyaga wehel wanaagsan oo carruurta ah iyo xayawaanka qoyska ee wanaagsan guud ahaan.
Cabirka eygan, in kastoo, ay muhiim tahay in isha lagu hayo xaaladda inta lagu jiro waqtiga ciyaarta. Huskador wuxuu si kama 'ah u garaaci karaa cunug yar inta lagu jiro guryaha adag.
Qaar ka mid ah arrimaha dhaqanka ee aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso
Labada Huskies iyo Labradors labaduba waxay leeyihiin qayb siman oo ah habdhaqanka aan loo baahnayn ee isku-darka Husky Labku ka dhaxli karo. Warka fiicani waa in sifooyinkaas si fudud loogu hagaajin karo tababar joogto ah.
Tusaale ahaan, sida Shaybaarka, Lab-Husky isku dhafka ah ayaa laga yaabaa inuu muujiyo xamaasad weyn wax ku calalinta . Kahor intaadan qarin kabahaaga iyo sibiibixyadaada, isku day inaad eeygaaga u siiso toy uu aad isagu u cuno oo u gaar ah.
Xusuusta qaarkood ayaa sidoo kale leh rabitaan aan la xakamayn karin hareeraha ka qod. Waxay dabeecaddan ka helaan Husky, oo leh dabiicad dabiici ah oo nafteeda u samaysa gabbaad ama u dhista keydinta cuntada ay ugaarsato.
Hal dariiqo oo weyn oo looga ilaaliyo iskudhafkaaga Husky-Lab inuu burburiyo beertaada waa sameynta a aagga qoditaanka . Buuxi gees ka mid ah deyrkaaga carro ama ciid isla markaana u tababarto eeygaaga si aad ugu qanciso dareenkiisa qoditaanka aaggan.
Siinta eygaaga jimicsi kugu filan oo aad isaga mashquuliso ciyaaraha iyo waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan ayaa sidoo kale ka jeedin doonta rabitaanka qoditaanka ama calalinta.
Markay tahay tababarka , eeyaha yar yar ee 'Husky Lab' ah ayaa lagu kalsoonaan karaa inay si dhakhso leh wax u bartaan. Qaar ka mid ah Shaybaarka Husky waa xiisaynaya barashada sida Labrador, halka kuwa kale ay u janjeeraan inay tijaabiyaan dulqaadkaaga maxaa yeelay waxay noqon karaan kuwo madax adag ama aan is waafajin karin sida Husky.
Habka ugu wax ku oolka badan ee lagu helo isweydaarsigan si aad u dhageysato amarradaada ayaa ah in la dhiso doorkaaga alfa . Sida Huskies, iskudhafkaani waa xayawaan xirxiran oo jecel inuu yeesho hogaamiye la raaco.
Adiga ayaa tababbari kara eeygaaga adoo adeegsanaya habab kala duwan sida xoojinta wanaagsan . Tani waxay u egtahay inay sida ugu fiican ugu shaqeyso Labskies, maadaama ay u hamuun qabaan inay ka farxiyaan milkiilahooda.
Haysashada eygaagu inuu barto amarrada oo uu barto xeelado dhowr ah ayaa ku siinaya aaladda 'Husky-Lab' isku darka kicinta maskaxeed ee ay u baahan tahay, sidaa darteed way iska ilaalin kartaa caajisnimo , taas oo u horseedda dabeecad burburin ah.
Bulsho sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah tababarkan iyo horumarintiisa. Warka fiicani waxa weeye in eeyani leedahay dabeecad saaxiibtinimo oo ka caawisa inuu la noolaado xayawaanka kale.
Eygaaga ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona soo-gaadhista dhawaaqyo kala duwan, ur, iyo indho indhayn inta ay weli tahay cunug. Tani waxay kaa caawin doontaa miyir beelid oo baro eygaaga sida loo dejiyo xaaladaha aan la aqoon.
Marka la eego asalka ugaarsiga ee waalidkeed, Huskador wuxuu leeyahay heerar tamar sare oo u baahan in lala kulmo jimicsi. Tani waxay ubaahantahay isweydaarsi ugu yaraan saacad jimicsi xoog leh maalin kasta.
Socodka, socodka, orodka - kuwan oo dhami waa waxqabadyo aad u wanaagsan oo kaa caawinaya inaad ku gubto dukaamada tamarta ee Lab Husky. Eeyadan ayaa sidoo kale jeclaan doona dabaasha, iyada oo la siiyay waqtigii la soo dhaafay ee Labrador sida biyo-haye.
Sidoo kale waad sii deyn kartaa eyga adigoo fasaxaya orod hareeraha-xadhigga meel bannaan ku jirta, ku dheh jardiinada eyga.
Marka ay timaado baahiyaha jimicsiga ee isku dhafka ah ee 'Husky Lab', guryaha aan lahayn deyr oodan ayaa laga yaabaa inaysan ahayn jawiga ugu habboon. Ha quusan, in kastoo; Tani waxay ku farxi doontaa meel kasta oo ay ku nooshahay illaa inta ay socod ku hesho ugu yaraan hal mar maalintii.
Maalmo aadan u oggolaan karin inay lugeeyaan iyaga, waxaad ku dari kartaa ciyaaro sida soo qaadasho liistada waxqabadyadooda. Ciyaaraha gudaha waa hab wanaagsan oo Huskadors diirada lagu saaro oo mashquul loo noqdo.
Fiiri Eygan Labsky ee gebi ahaanba ku qanacsan la ciyaarka laf:
Waxaa jira hal shay oo milkiileyaal badan eeygan isku raacsan yihiin waana taas xaqiiqda ah in Siberia Husky Lab ay isku qasmaan daadsan wax badan .
Waxaad filan kartaa xilliyadeeda daadinta ugu yaraan laba jeer sanadkii, inta lagu jiro guga iyo deyrta . Waad uga mahadcelin kartaa Lab iyo Labba labka labba lab oo dhumuc weyn leh.
Inta lagu jiro xilliga daadinta, waxaad rabtaa inaad cadaydo jaakada eygaaga maalin kasta in daadinta la xakameeyo. Ka baxsan xilliyadan, cadayashada waa in la sameeyaa laba jeer usbuucii .
Maal gasho qalabka qurxinta sida buskudka dharka hoosta lagu xirto iyo wax lagu duubo, sidoo kale, inaad dharkaaga ka ilaaliso timaha eeyga. Faaruqinta gurigaaga ama aagga eygu ku ciyaaro maalin walba sidoo kale waa lagula talinayaa.
La socoshada kuwooda nadaafadda ilkaha sidoo kale waa waajib, gaar ahaan maadaama uu Huskador caado u leeyahay cunis. Caday ilkaha eygaaga ugu yaraan hal mar maalintii si aad uga hortagto ilkaha bololka iyo ur xun.
Lab Husky qalalan eeyo yaryar ayaa u baahan in la quudiyo ugu yaraan 1.5 koob oo ah cuno cunug tayo sare leh , oo loo qaybiyay 3 ilaa 4 cunto maalintii. Markay gaaraan bisha lixaad, waxaad bilaabi kartaa inaad quudiso oo keliya 2 jeer maalin kasta.
Hubso in cuntada cuntadaada Huskador waxay hodan ku tahay borotiin, karbohaydraytyo, dufan, iyo fiitamiino. Ilaha tayada sare leh ee borotiinka sida hilibka muruqa ama hilibka xubnaha waxay kaa caawin doontaa xoojinta lafahaaga iyo kala-goysyada eeygaaga, dufankuna wuxuu kaa caawin doonaa inuu ilaaliyo heerarka tamartiisa.
Waad ku ridi kartaa kibble qallalan oo qiimo leh isla marka uu mid noqdo oo aad u kordhiso adeegyadiisa 2 ½ koobabka kibble maalin kasta, oo loo qaybiyay 2 cunto.
Iskutallaabta Siberia Husky Lab iskutallaabtiisu waxay leedahay celcelis nolosha qofka ee 11 illaa 13 sano , laakiin arrimaha caafimaadka ee kaladuwan ayaa laga yaabaa inay yareeyaan cimrigan nolosha.
Sababtoo ah barkadaha hiddo-wadaha ee kala duwan, Lab Husky mix ayaa u nugul tiro ka mid ah arrimaha caafimaadka hidaha . Labrador Retrievers iyo Siberia Huskies labaduba waxay aad ugu nugul yihiin xaaladaha caafimaad qaarkood, sidaa darteed waxaad ka filan kartaa Lab-labkaaga 'Labjo' inuu suurtogal u noqdo inuu dhibaatooyinkan sidoo kale dhaxlo
Burburka Jimicsiga ee Jimicsiga Leh (EIC)
Tani waa cillad hidde ah oo nasasho leh taas oo keenta eeyaha ay saameysay inay lumiyaan xakameynta murqaha oo ay burburaan ka dib muddo jimicsi xad-dhaaf ah.
Xasaasiyadda cuntada iyo xasaasiyadda manka xilliyeed
Iska ilaali astaamaha sida guduudashada agagaarka aagga sanka, maqaarka cuncunka, leefka badan, timo luminta, iyo baalalka oo barara. Huskador u gee dhaqtarka xoolaha markii aad dareento astaamahan.
Tani waa cillad la iska dhaxlo oo ku badan eeyaha waaweyn. Haddii eey leedahay sinta dysplasia , saldhigyadooda wadajirka ah ee miskaha ayaan si buuxda loo horumarin, taasoo ka dhigaysa xanuun inuu ku socdo ama ku ordo.
Xanuun daran Caudal Myopathy
Tani waa cillad muruq ah oo ay sababaan dhaawacyo ku dhaca muruqyada dabada - cillad guud oo ku dhacda eeyaha shaqeeya.
The qalalan-conjunctivitis kerata
Milkiileyaasha xayawaanku waxay badanaa ugu yeeraan cudurkan 'isha qallalan'. Eeyadu waxay yeeshaan corneas bararsan sababtoo ah qoyaan la'aanta indhaha.
Myelopathy oo xumaada
Tani waa cudur badanaa laga heli karo eeyaha waaweyn. Hawlahooda laf-dhabarta ayaa hoos u dhacaya, natiijadaasna, waxay luminayaan isku-duwidda iyo dhaqdhaqaaqa aagga dambe. Eeyaha qaba cudurka 'myelopathy' oo xumaada ayaa laga caawin karaa xarkaha iyo kaaryooyinka eyga haddii ay lumiyaan awooddooda socodka.
Indho beelku waa cudur kale oo indhaha ku dhaca oo si weyn u saameyn kara aragtida eeyga - xitaa waxay u horseedi kartaa indho la’aan. Cudurkan waxaa badanaa sababa gabow. Waxay sidoo kale ku xirnaan kartaa sonkorowga eeyaha , sidaas darteed isku dheellitirka sonkorta eygaaga ee cunnadiisa waa in si dhab ah loo qaataa.
Suuxdinta Idiopathic waxay ku badan tahay Siberia Husky. Suuxdin ama suuxdin eeyaha waxaa sababi kara qarax aan caadi aheyn oo dhaqdhaqaaqa koronto ku dhaca maskaxda eyga.
Curyaannimo Laryngeal ah
Waa wax caadi u ah eeyaha waaweyn inay helaan xaaladdan. Waxay saameyn ku yeelan kartaa awooddooda neefsashada, laakiin waxaa dhab ahaan lagu daaweyn karaa qalliin.
Arrimo kale oo caan ah oo labrador iyo Husky waalidkood u gudbin karaan caruurtooda 'Husky Lab' ayaa ah cayilnaan , arrimaha ilkaha , iyo arthritis (saameynta buurnaanta).
Sida noocyada kale ee isweydaarsiga, Labrador Huskies waxay u baahan yihiin qaddarin dheeraad ah oo ilaalin iyo daryeel ah. Hubso in eyga Huskador ee aad guriga keento uu ahaa caafimaad-baaro lagana nadiifiyay xaaladaha hidda-socodka.
Haddii aad xiriir la leedahay abuure u ah yar yar Lab Lab ah, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso xiriir joogto ah. Ha ka waaban inaad su'aalo weydii , gaar ahaan caafimaadka waalidiinta.
Isku day sida ugu fiican ee aad ku heli karto abuure kuu oggolaan doona inaad ilaaliso waalidka iyo cunugga laftiisa ka hor intaadan gurigaaga Huskador geyn.
Ka fogow iibiyeyaasha bixiya arday gorgortan. Sidaad horeba u ogayd, isku-darka Lab-Husky wuxuu noqon karaa qaali in la daryeelo. Haddii aad diyaar u tahay inaad lacag isticmaasho, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ku qarash garaacdid eey soosaarayaal sumcad leh taasi waxay ku siin kartaa aragti guud oo sharci ah ee eyda hiddeheeda.
Iyada oo ay sii kordheyso caannimada isku dhafka 'Husky Lab', ayaa qiimaheeda sidoo kale sare u kici karaa sanadaha soo socda. Waqtigan xaadirka ah, qiimaha Lab puky puppy ayaa maraya $ 400 ilaa $ 800 mid kasta.
Kalkaaliyeyaasha Lab Husky iyo xarumaha samatabbixinta
Soosaarayaasha Lab Husky way adkaan kartaa in la helo, markaa waxaad la xiriiri kartaa soosaarayaasha Lab iyo Huskies bedelkeeda.
La xiriir xiriiriyayaashan si aad u ogaato haddii ay leeyihiin Husky Lab iskudhaf eeyo yaryar oo iib ah :
Smith beeraha Labradors (Minnesota)
Bama Huskies (llabama)
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad la tashato khubarada maxalliga ah sida dhakhaatiirta xoolaha iyo naadiyada taranka si aad talo uga siiso soosaarayaal sumcad leh deegaankaaga.
Haddii qiimaha ardayga sheybaarka 'Husky Lab' oo ka socda breeder uu adiga kugu adag yahay, sidoo kale waxaad ikhtiyaar u leedahay korsato ama samatabbixin ah Huskador. Marka laga reebo qiimaha hoose, qaadashada an eyga weyn sidoo kale way fududaan kartaa, maadaama aadan wax ka qaban doonin tababarka eey.
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah ururada samatabbixinta iyo hoyga loogu talagalay sheybaarada iyo Huskies. Waad la xiriiri kartaa si aad u ogaato haddii ay hayaan dad waaweyn oo loo yaqaan 'Huskadors' oo loo heli karo korsasho.
Badbaadinta Labrador ee Badbaadinta Florida
Samatabbixinta iyo Korsashada Labbadeedka Cirka Koonfurta (Alabama)
Samatabbixinta Arctic (Utah)
Guriga Husky (New Jersey)
Isku darka sheybaarka 'Husky Lab' ma'ahan mid la awoodi karo sida kuwa kale ee loo yaqaan 'crossbreeds' maanta, laakiin xaqiiqdii waa u qalantaa dinaar kasta.
Isku-dhafkan ayaa ah jecel iyo caqli badan eey sameeya xayawaan qoys oo wanaagsan iyo wehel.
Iyaga oo leh hidaha eyga shaqeeya, Labsky wuxuu noqon karaa tababar fudud , laakiin waa inaad adigu sameysid sidii alfa ee xirmada. Tababbarka joogtada ah iyo is dhexgalka bulshada ayaa sidoo kale muhiim u ah barashada eeygan habdhaqanka saxda ah.
Isu diyaari inaad wax intaa ka badan haysato nolol firfircoon , sidoo kale, sida Lab iyo Husky iskutallaabtu ugu baahan yihiin ugu yaraan saacad jimicsi maalin kasta.
Gurigaaga ma ku leedahay iskudhaf Husky iyo Lab ah? Ma ka badan tahay Labrador Retriever ama Siberian Husky? Nala wadaag khibradahaaga faallooyinka hoose!
Chorkie, Chiweenie & Chug - Liistada KASTA ee Chihuahua Mix Dog
Lama hubo Red Heeler? Waa kuwan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
chihuahua iyo eryga isku dhafka ah
waa maxay adhijir Jarmal buluug ah
Eygaygu ma joojin doono qallayl
shaybaadhka Shepherd ee jarmalka brindle
Magacyada eyga shaybaadhka ee eeyaha lab